BUDDHIST TERMS' Dictionary: INCOMPREHENSIBILITY - အစိန္တေယျ
INCOMPREHENSIBILITY - အစိန္တေယျ
အစိန္တေယျ - မကြံစည်နိုင်သောအရာ၊ ကြံစည်စဉ်းစား၍ မသိနိုင်သောအရာ။
လောက၌ ကြံစည်စဉ်းစားခြင်းဖြင့် ပြည့်စုံအောင် မသိနိုင်သောအရာ လေးမျိုးရှိ၏၊ ၎င်းကို အစိန္တေယျ လေးပါးဟု ခေါ်သည်။
(၁) ဘုရားရှင်တို့အရာကို မကြံစည်နိုင်၊
(၂) ဈန်၏အရာကို မကြံစည်နိုင်၊
(၃) ကံ၏ အကျိုးပေးမှုကို မကြံစည်နိုင်၊
(၄) လောက၏ အကြောင်းအရာကို မကြံစည်နိုင်။
“ရဟန်းတို့ လောကသည် မြဲသလော၊ မမြဲသလော၊ အဆုံးရှိသလော၊ မဆုံးမရှိသလော စသည်ဖြင့် လောကအကြောင်းကို မကြံစည်ကုန်လင့်။ ထိုသို့ ကြံစည်ခြင်းသည် အကျိုးမရှိ၊ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းငှာ မဖြစ်” ဟု မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူသည်။
Unthinkable; impenetrable; something beyond the reach of thought or reason
There are four things in the world which are incomprehensible. They are known as the four Acinteyyas:-
(1) the domain ofaBuddha, Buddha-visaya;
(2) the sphere of the trances, jhana-visaya;
(3) the consequences of volitional action, kamma-vipaka; and
(4) brooding over the world, loka-cinta.
“Bhikkhus, do not brood over the world as to whether it is eternal or temporal, limited or endless, etc. Such brooding is of no use; it does not lead to the realization of Nibbᾱna”.